डा. डीआरको ‘मायाको मिठो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) – Hotpati Media
डा. डीआरको ‘मायाको मिठो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १७:३५ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौं : प्रख्यात तथा किर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘मायाको मिठो’ सार्वजनिक भएको छ । मुनाल शिशिर द्वारा निर्देशित र गायक दिपक खरेलको स्वर तथा सागर सरद अधिकारीको सङ्गीत रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । भिडियोमा कशिश, सुदर्सन र रुपकको अनस्क्रिन रोमान्स देख्न सकिन्छ । भिडियोलाई बुद्ध थापाले छायाँकन गरेका हुन् ।